Mashandisiro ekushandisa mitsva yeBoomerang mhedzisiro pa Instagram | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa mitsva yeBoomerang mhedzisiro pa Instagram
Instagram inoramba ichikura seimwe yemasocial network zvakanyanya mumakore apfuura, chikamu chebudiriro chiri pachena nekuda kwenzira iyo Facebook inogara ichigadzirisa mashandisiro acho nenhau. Iye zvino yave nguva yaBoomerang, rimwe remabasa anonyanya kushandiswa mu Instagram Nyaya iro rinozotibvumidza kuti tigadzirise nguva yavo pamwe nekuwedzera mitezo mitsva mitsva ye "retro" iyo inofadza vashandisi vayo. Sezvo muActualidad iPhone isu tinogara tichida kuti iwe uwane zvakanyanya kubva kune yako iPhone nePad, Isu tinokuratidza maitiro ekushandisa mitsva mhedzisiro yeBoomerang pa Instagram uye gadzirisa Nhau senge pro, urikupotsa here?
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ichi chitsva chinzvimbo hachipo natively pa Instagram kune vese vashandisi, iwe ungatofanira kumirira icho, nekuti iko kuvhurwa kuri kudzadzarika, zvisinei, Unogona kuishandisa pese paunoda kubva pachako application icho Boomerang kubva Instagram chaanowanikwa muApple App. Muvhidhiyo inotungamira ino chinyorwa tinokuratidza nenzira yakapusa yekugadzirisa maBoomerangs ako nemhedzisiro mhedzisiro ye Instagram, asi kana uchida kuiverenga, tinokuratidza nhanho nhanho.
Mashandisiro ekushandisa Boomerang mhedzisiro
Isu tinovhura iyo Instagram application uye tinowana kurekodha kweNhau dzedu.
Isu takasarudza Boomerang uye takarekodha imwe senguva dzose, nekukurumidza uye nyore.
Iye zvino mukutarisa tinobaya pane bhatani rinoonekwa mukona yekumusoro kurudyi.
Iyo Boomerang mupepeti ichavhura, ine yakaderera timeline isu tinokwanisa kugadzirisa iyo nguva, nepo matatu emativi mabhatani anotiratidza isu matatu matsva mhedzisiro.
Sezvatakataura, Boomerang ikozvino inowedzera mitsva mitsva mitsva inonakidza nayo yekuita kuti maBomeromer edu anyanye kunakidza
Duo: A "rewind" mhedzisiro senge patinodzoreredza chero zvirimo.
Echo: Chiitiko che "Blur" chinokwevera chinhu mukutarisa
Slowmo: Inononoka kufamba kweBoomerang yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa mitsva yeBoomerang mhedzisiro pa Instagram
Oprah Winfrey haasisiri mugadziri mukuru wemuvhi waDick naZiering weApple TV +
Inotevera Android Smartphones inogona kushandisa iyo Ultra Wideband yeiyo iPhone 11